एमसीसी पास नभए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अमेरिकाले दिएको यो जवाफले झस्कायो नेपालका सबै नेताहरुलाई ! – GALAXY
एमसीसी पास नभए के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा अमेरिकाले दिएको यो जवाफले झस्कायो नेपालका सबै नेताहरुलाई !
एमसीसी पास गराउन पछिल्लो ४ दिन अमेरिकाले नेपालका शीर्ष नेताहरुलाई फकाउने प्रयास गर्यो र पास हुने निष्कर्षसहित अमेरिकी टोली स्वदेश फर्कियो । सारा जनमत विपक्षमा हुँदा पनि एमसीसी पास गराउन अमेरिकाले किन यति धेरै दबाब दिइरहेको छ यो रहस्यमय रहेको राजनीतिक बिश्लेषकहरु बताउछन् ।
यसैबीच, नेपालका अब एमसीसी पास नभए के हुन्छ ? भन्ने नेपालको प्रश्नमा नेपाल सरकार र यहाँका नेताहरुलाई झस्काउने जवाफ दिएको छ । उसले एमसीसी पास नभए सबै सहयोग बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको हो ।